Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguCarolina Mountain Vacations
Nandipha umbono omkhulu wentaba kwimizuzu nje ukusuka edolophini! Ngaphezulu kweMithi ziikhilomitha ezi-5 ukusuka kwisiXeko saseBryson kunye nohambo olufutshane ukuya kwimisebenzi edumileyo efana ne-whitewater rafting kuMlambo iNantahala, ukukhwela intaba ngeebhayisekile kwiindlela zeTsali, kunye nokukhwela iGreat Smoky Mountain Railroad. Le ndlu yelog ibekwe bucala kwindawo esentabeni enesango. Indlela egangathiweyo ikwenza unyuke intaba. Inxalenye emfutshane yendlela yegrabile ikusa phezu kweMithi kunye nombono omangalisayo.
I-SUV okanye iLori, isithuthi esinemvume yomhlaba ephezulu siyafuneka; Amacandelo egrabile kuthambeka oluthe kratya olunokutshintsha umva, iindawo ezirhabaxa eziphakathi ezifuna ukucocwa komhlaba okuphezulu kuneemoto ezininzi, 4x4 AYIFUNI. (Uninzi lweeMini-Vans azifanelekanga)
Yiya Phezu kweMithi nangaphezulu kwamafu! Le ndlu yelog yanamhlanje inemigangatho emibini emikhulu, apho unokuthatha khona iimbono ezinomtsalane ukusuka kubutofotofo besitulo esishukumayo okanye ibhafu yabucala eshushu. Indawo yokupaka igrabile inendawo eninzi yeemoto ezimbini. Ukusuka kwi-driveway unokufikelela kumnyango wangaphambili usebenzisa iseti emfutshane yezinyuko. Iseti yesibini yezitebhisi ikhokelela kumgangatho osezantsi, ibhafu eshushu, kunye negumbi lokulala elikhulu. I-grill ekufutshane nekhitshi ilungile ekuphekeni i-steaks ngelixa uphefumla umoya omtsha wentaba. Ungatya i-al fresco okanye ukonwabele iglasi yewayini ngelixa ubukele ukutshona kwelanga.
Zilungiselele ukwenza iinkumbulo kwigumbi elikhulu elibanzi, apho iifestile ezinkulu zizisa iintaba ngaphakathi. Relax kwii-sofa ezitofotofo zesikhumba, funda, okanye ubukele imuvi. Lungiselela umthendeleko ekhitshini elivulekileyo kunye ne-granite countertops (okanye nje uphonsa i-pizza). Iwasha kunye nesomisi zibekwe kwigunjana ngaphandle kwekhitshi ukwenzela ukuba kube lula kuwe. Igumbi lokulala lesibini elinebhedi enkulukazi lisezantsi kweholo, ngaphaya kwegumbi lokuhlambela eligcweleyo. Ikhabhathi yedyasi ekufutshane inokhetho lwemidlalo yebhodi yolonwabo losapho.
Cela umngeni kusapho lwakho okanye kubahlobo bakho kwitumente yephuli kwindawo ephezulu ephezulu, okanye uhlale kwaye ufunde incwadi kwisitulo esishukumayo. I-loft nayo inendawo yokuhlambela efanelekileyo enekota ezintathu.
Ngaphezulu kweMithi yindawo entle yokubaleka ukuya kwihoneymoon, uhambo lwesikhumbuzo seminyaka emibini, okanye ukurhoxa kosapho. Lonke inqanaba elisezantsi ligumbi lokulala elikhulu elinodonga oluneengcango zeglasi ezityibilikayo ezikhokelela kumgangatho wabucala kunye nebhafu eshushu. Igumbi likwanegumbi lokuhlambela eline-ensuite enebhafu ye-jacuzzi epholileyo. Ibhedi ekhululekileyo yobukhulu obuyinkosi ibekwe ngokugqibeleleyo ukujongana nembono yentaba kunye neziko elimnandi lamatye.
Le ndlwana imalunga neembono! Zilungiselele ukonwabela iimbono zeentaba ezingapheliyo malunga nefestile nganye oyijongileyo xa undwendwela Phezulu kweMithi.
Le khabhathi ifanelekile kumntu ojonge ukuba ngasese kwiintaba ezizolileyo ngelixa ehleli kufutshane ngokwaneleyo ukuba afikelele kwindawo yokuthenga emnandi kunye nokutya okunokunikezelwa kumbindi wedolophu iBryson City. Nokuba ujonge i-adventure ye-zip lining kunye namanzi amhlophe e-rafting kwi-Nantahala Gorge, okanye uhambo oluzolileyo ngaphakathi kwe-Smoky Mountains National Park, uhambo olungapheliyo lweentaba kukumgama nje omfutshane ukusuka kuwe xa uhlala phezu kweMithi.
Izimvo eziyi-2 259
Sifumaneka iiyure ezingama-24 ngosuku ngayo nantoni na iindwendwe zethu ezinokufuna ngexesha lotyelelo lwazo.
UCarolina Mountain Vacations yi-Superhost